အင်ဒိုနီးရှားက ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘာသာဝင်တွေကတော့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို သတ်ချင်တယ်ဆိုပြီး အေးချမ်းစွာဆန္ဒပြနေကြတယ်။ သူတို့အကြမ်းဖက်သမားဆိုပြီး
မတရားပုံကြီးချဲ့ စွပ်စွဲကြတဲ့ ၉၆၉တွေက မွတ်ဆလင်တွေကို သတ်ချင်တယ်လို့ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ပြီး တစ်ခါမှဆန္ဒမပြဖူးကြပါဘူး။ ၉၆၉တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်မှာအားပေးဖို့၊ ဘာသာတူချင်းလက်ထပ်ဖို့ပဲ လှုံ့ဆော်ကြတာပါ။ ဘယ်သူက ဘယ်ဘာသာဝင်တွေက အကြမ်းဖက်သမားလဲ ဘယ်သူတွေက အစွန်းရောက်တွေလဲ ဆိုတာ လက်တွေ့ပြနေတာပါ။ မြန်မာပြည်က မွတ်ဆလင်များက ဒီလို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုသတ်ချင်တယ် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို ဂျီဟက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အင်ဒိုမွတ်ဆလင်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဘာပြောမလဲ သိချင်ပါတယ်။ ဒီပို့တင်ခဲ့သောသူ
ဖြဲမုန့်ရောင်းချနေသော နန်းသီရိမောင်ကိုတွေ့ရစဉ်။ (ဖြဲမုန့်ဆိုတာ ဘာမုန့်လဲတော့မသိဘူး။ ဆိုင်းဘုတ်မှာတပ်ထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ) မိမိနှစ်သက်ရာ ရွေးချယ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်... မိမိတင်လိုသည်များကိုလည်း royalbigcat2013@googlemail.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်.. .comment ရေးသွားချင်လျင် no comment သို့မဟုတ် comment ကို ကလစ်ပါ..
ဒီလို ဂျာနယ်မျိုး Media လောကမှာရှိသင့်လား။ ကိုယ့် လူမျိုးအချင်းချင်းဆိုရင်တော့ ထိခိုက်နစ်နာမှု့တွေမကြည့်... သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းစာပါ။ လူလိုသိပါ။ ဒီ မိန်းကလေးနေရာမှာ သင့်သားသမီး၊ သင့်ညီမဆိုရင် သင်ဒီလိုလူသိရှင်ကြား နာမည်ပျက် သိက္ခာကျအောင် လုပ်ပါ့မလား။ အမှန်စင်စစ် ငပလီက Amazine Hotel ကြော်ငြာရိုက်တာပါ။
ကိုယ့်မြန်မာ မိန်းကလေးတစ်ယောက် သူ့ရဲ့ဝါသနာနဲ့ သူစိတ်ပါဝင်စားတဲ့ အနုပညာနဲ့ ဝမ်းစာရှာနေတာကို ဒီလိုလုပ်ကြံရေးတဲ့ ကိစ္စမျိုးဆိုတာ နှမသားချင်း
ကိုယ်ချင်းစာတဲ့သူတိုင်း လက်မခံနိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း ဒီစာကို ဖတ်ပြီးရင် ကာယကံရှင် မိန်းကလေး Emerald Nyein အတွက် အမှန်ကိုတခြားလူတွေသိအောင် ဒီ Photo လေးကို ကျေးဇူးပြုပြီး Share ပေးသွားကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်..... Credit - လေဒီရှုရှု
သတင်းတစ်ခုကိုသေချာမသိပဲ Myanmar News Week Journal ကစော်ကားထားတာကြီးပါ.. ဒါက ငပလီက Amazine Hotel ကြော်ငြာရိုက်ထားတယ်ဆိုတာသက်သေထူပေးနိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးပါ... ငပလီကိုသွားတုန်းက .. Emerald အမေရော ညီမရောပါသလို.. မိုက်ကယ်လန်းရဲ့ ဇနီးနဲ့ကလေးတွေလည်းပါပါတယ်.. မနက်ကအစောကြီး Emerald ဖုန်းဆက်လာတယ်.. အရမ်းစိတ်ညစ်လို့တဲ့.. ကိုယ်မဟုတ်ပဲနဲ့အစွပ်စွဲခံရတာကြီးကို... အဲ့ဒီ့နေရာမှာသူတို့အမေတွေ..အမတွေသာဆိုသူတို့ဘယ်လိုနေမလဲ...??? မီဒီယာဆိုတာမရှိမဖြစ်ဆိုတာလက်ခံပါတယ်... အခုဟာက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဘလိုင်းကြီးစော်ကားလိုက်တာပါ.. ရိန်းတို့တောင်..ရိန်းတို့ပုံအောက်မှာ.. ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းတစ်ခုခုလာရေးရင်မခံနိူင်ကြပါဘူး.. သူ့နေရာမှာဝင်ပြီးနေပေးကြည့်ကြပါဦး !!!! Fuckkk Offf Bitchhhhhhhhhhhhhh :((((
မွတ်ဆလင်တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို၁၉၄၈ မှာပြီးဆုံးခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ်ကအလုပ်ကြမ်းသမားများအဖြစ် အစုလိုက်အပြုံလိုက်အိန္ဒိယမှဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည်မှာကြာပြီဖြစ်သော်လည်း ဘယ်တုန်းကမှ (မူရင်းဒေသခံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့်) အပြည့်အ၀လိုက်လျော ညီထွေသဟဇာတဖြစ်အာင် ပေါင်းစပ်ဆက်ဆံနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြဘူး တဲ့ ။ Muslims entered Buddhist-majority Myanmar en masse as indentured labourers from the Indian subcontinent during British colonial rule, which ended in 1948, but despite their long history they have never been
fully integrated.http://www.abc.net.au/news/2013-03-22/bodies-in-streets-of-riot-hit-myanmar-town/4589528 http://www.facebook.com/abcnews.au
FACEBOOK ပေါ်က ဝေဖန် မှု များစွာနှင့် ဓါတ်ပုံအား သင်ဇာဝင့်ကျော် ရှင်းပြီ =========================================
မကြာသေး ခင်က Facebook ရဲ့ စာမျက်နှာ ထက်ကို သင်ဇာ ၀င့်ကျော်ရဲ့ ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံ တက်ရောက် လို့ လာခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီ ဓါတ်ပုံ ထဲမှာ သင်ဇာ ၀င့်ကျော်ရဲ့ လွတ်လပ်ပေါ့ ပါးတဲ့ ၀တ်စား ဆင်ယင်မှု တစ်ခုကို မြင်တွေ့ ခဲ့ရတဲ့ အပြင် ဓါတ်ပုံရဲ့ ဘေးမှာ ရှိတဲ့ လူငယ်လေးက ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ဖြစ်မလဲ ဆိုတာက လည်း စိတ်ဝင်စား စရာ ဖြစ်ခဲ့တာ အမှန် ပါပဲ။ အချို့သော ပရိသတ်တွေ က အဲဒါဟာ သင်ဇာ ၀င့်ကျော်ရဲ့ မောင်လေး ဖြစ်နိုင် တယ်လို့ သုံးသပ် ကြသ လို တချို့ ကလည်း မဟုတ်နိုင် ဘူးလို့ ပြတ်ပြတ် သား သား ငြင်းဆို ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ကမ်းခြေနဲ့ ပတ်သက် လို့လည်း ချောင်းသာ လို့တစ် မျိုး၊ ငွေဆောင် လို့ တစ်ဖုံ မှတ်ချက် ပေးတာတွေဟာ တကယ့် အများ အပြား ပါပဲ။ အခုတော့ အဲဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီး သင်ဇာ ၀င့်ကျော် က ရှင်းလင်းချက် တစ်ရပ် ပေးလိုက် ပါပြီ။ “အဲဒါ
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ် လလောက်က ချောင်း သာကို သင်ဇာ တို့ မိသား စုတွေ အပန်းဖြေ သွားရင်းနဲ့ သဲဖြူ ကျွန်းမှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံပါ။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် တင်လိုက် တာလို့ ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်ဇာ ၀င့်ကျော် ဘေးနား က ကောင်လေး က မောင်လေး အရင်းပါပဲ။ မိသားစုနဲ့ အတူ တခြား သူငယ် ချင်းတွေ လည်း ပါခဲ့ပါသေး တယ်။ အဲဒီ တုန်းက ရေကူး တာ ဆိုတော့ စွပ်ကျယ် ထပ်ပြီး ၀တ်တာ မျိုးလည်း မရှိဘူးလေ။ ဘယ်သူမှ လည်း အဲဒီလို မ၀တ် ကြပါဘူး။ Two Pieces နဲ့ ဆိုတော့ အဲဒါ ကို အမြင် စောင်းကြတယ် တူပါရဲ့။ သင်ဇာက မလိမ်တတ်ပါဘူး။ အမြဲတမ်း အမှန်အတိုင်း ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြော ပါတယ်။ ရေကူးတယ် ဆိုတော့ Relax ဖြစ်တဲ့ ၀တ်စုံလေး ကို ၀တ်ခဲ့ တာပါ။” ဟု ပြောလာတာက Facebook ပေါ်က ဓါတ်ပုံ အတွင် သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ဖြေရှင်း ချက်ပါပဲ။ ဘယ်ဟာ အမှန် ဘယ်ဟာ အမှား ဆိုတာ ကတော့ ကာယကံ ရှင်သာ အသိဆုံး ဖြစ်ပါ လိမ့်မည် ထင်ပါသည်။ မင်းသမီး သင်ဇာဝင့်ကျော်ဟာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ sexy model ဆိုဒ်များတွင်
သူမ၏ မရှုမ လှ မပေါ် တပေါ် မလုံတလုံ ၀တ်စား ဆင်ယင်မှု ဓါတ်ပုံ များ အပျံ့လွင့်ဆုံး မင်းသမီး ထဲမှာ တစ်ယောက် အပါ အ၀င်ဟု ပြော ရင်လည်း မမှားနိုင် ပါဘူး…………… mmforward (ဒီသတင်း တွေ့ပြီး ပုံမတွေ့သူများအတွက် ပုံကော သတင်းပါ ပြန်ရှယ် ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီပုံပဲလို့ ထင်တယ်။ နန်းခင်ဇေယျာလောက်တောင် မထင်ရှားပါဘူး။)မိမိနှစ်သက်ရာ ရွေးချယ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်... မိမိတင်လိုသည်များကိုလည်း royalbigcat2013@googlemail.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်.. .comment ရေးသွားချင်လျင် no comment သို့မဟုတ် comment ကို ကလစ်ပါ..
စေ့စေ့လေးပဲဗျ။ ၀ဲတော့ပါတာပေါ့..အဟတ်။ @ အချစ်တက္ကသိုလ်
အစကထဲက အွန်လိုင်းမရောက်အောင်နေပါ။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပါ။ ချက်ကြီးတော့ စိတ်ရှုပ်မခံနိုင်ဘူး။
မြန်မာပြည်က ၀ယ်လက်တယောက်က ဒေါ်လာ သုံးသောက်နဲ့ဝယ်ဖို့ လဲကမ်းလှမ်းနေပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိတ်ဖြစ်ဖို့ များတယ်။ လိုချင်တာလေးတွေကို ကူးစရာရှိတာကူးထားကြပါ။
အသက် ၉၀ အရွယ်ရှိ သတိုးသား အဖိုးကြီး တစ်ဦးသည် အသက် ၁၅ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးနှင့် မင်္ဂလာဆောင်ရာ မင်္ဂလာဦးညတွင် သတိုးသမီးမှ အိပ်ရာခန်းထဲ အ၀င်မခံ ဘဲ တံခါး ပိတ်ထားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး နှစ်ညတိုင်တိုင် သတိုးသား အဖိုးကြီးမှ အိပ်ခန်းထဲသို့ ၀င်ရောက်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော် လည်း သတိုးသမီးမှ တံခါး ပိတ်ထားခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင် သတိုးသမီး ဖြစ်သူမှာ သူမ မိဘအိမ်သို့ ထွက်ပြေး သွားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ သတိုးသား အဖိုးကြီးသည် အမျိုးသမီးငယ်၏ ဖခင် ယီမင် လူမျိုးနှင့် မိခင် ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား အမျိုး သမီး အား မင်္ဂလာခန်းဝင်ကြေး အမေရိကန် ၁၇၅၀၀ ပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ မင်္ဂလာဦးည ရောက်ပြီးမှ အာဝါဟ၀ိဝါဟ မပြုလုပ်ခဲ့ရ၍ အထူး မကျေမချမ်း ဖြစ်နေသော သတိုးသား အဖိုးကြီး သည် အမျိုးသမီးငယ် ဖခင်နှင့် မိခင် ဖြစ်သူအား တရားစွဲဆိုသွားမည်ဟု ဆိုသည်။ အမျိုးသမီးငယ်ကို သူနေအိမ်သို့ ပြန်ပို့ရန် (သို့မဟုတ်) ခန်းဝင်ကြေးကိုပြန်ပေးရန် သတိုးသား အဖိုးကြီး က တောင်း ဆိုသွားရန် စီစဉ်နေသည်ဟု ဆိုသည်။ ယခုအခါ အသက် ၁၅ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်အား ကယ်တင်ရန်ဆော်ဒီ လူ့အခွင့်အရေး လူပ်ရှား သူများက အစိုးရအား တောင်းဆိုထားပြီး ယခုကဲ့သို့ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်နေသူ တစ်ဦးက အသက် ငယ်ရွယ် သူ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးကို လက်ထပ် ယူခြင်း အပေါ် ရှုတ်ချ ကန့်ကွက်နေကြသည်ဟု ဆို သည်။ သူတိုးသား အဖိုးကြီးက မိမိ အနေဖြင့် တရားဝင် လက်ထပ်ယူခြင်းသာဖြစ်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ အမှားလုပ်တာ မရှိပါဟု ပြောကြားသည်ဟု ဆိုသည်။မိမိနှစ်သက်ရာ ရွေးချယ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်... မိမိတင်လိုသည်များကိုလည်း royalbigcat2013@googlemail.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်.. .comment ရေးသွားချင်လျင် no comment သို့မဟုတ် comment ကို ကလစ်ပါ..
၁။ အမျိုးသမီး လွှတ်တော် အမတ်တစ်ဦးမှ နိုင်ငံတွင် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းကို တရားဝင် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဥပဒေရှိသင့်ကြောင်း အဆို တင်သွင်းမည်ဟု ကြားသိရသောအခါ ထုံးစံအတိုင်းပင် ကန့်ကွက်သံ၊ လက်ခံသံ တဝေေ၀ ကြားရပါ သည်။ ခံစားချက်ကို အဓိကထား ပြောနေသည်ကများပါသည်။ ခံစားချက်ကို ဘေးဖယ်၍ ပြောပြချင်သည် များရှိလာသည်။ ၂။ ပြည့်တန်ဆာဟု ခေါ်သည်ဖြစ်စေ၊ မိန်းမရွှင်ဟု ခေါ်သည်ဖြစ်စေ၊ လိင်လုပ်သားဟု ခေါ်သည်ဖြစ်စေ အမှန်စင်စစ်
“ဖာ” ပင်ဖြစ်သည်။ (စကားရိုင်းလျှင်သည်းခံပါ၊ ဆက်ရှင်းပါမည်) အခေါ်အဝေါ်က စကားပြောပါသည်။ ဖာကို ဖာဟု မခေါ်ပဲ လိင်လုပ်သားဟု ခေါ်သောအခါ တမျိုးသော ဂုဏ်ရှိနေသယောင်ထင်နေရသည်။ (ဂုဏ်မရှိဟု ပြောခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ၊ ပုဂ္ဂလအစွဲကြောင့် ခံစားချက်ပြောင်းသွားတတ်ကြောင်း ပြောလိုရင်း ဖြစ်သည်။) ကေတီဗီမှာ အဆိုတော်လုပ်သည်ဟု နာမည်တတ်ထားသော မိန်းကလေးများကို ဖာဟု ခေါ်သော အခါ ဆတ်ဆတ်ခါ နာပါလိမ့်မည်။ ထို အနာသည်လည်း ထိုဘ၀မှ ရုန်းထွက်ရန် တွန်းအား တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ထိုအလုပ်ကို တရားဝင်ရေးမ၀င်ရေးထက် “ဖာ” ဟူသော စကားကိုပင် နှုတ်မှ မထွက်ရဲသော အမျိုးကောင်း သမီးငယ်များ ရှိနေကြောင်း ထင်ရှားစေရန် ဖြစ်သည်။ ယခုစာသည် ထိုဖာများကို တရားဝင်သင့် မ၀င်သင့်ထက် တွေးတောထိုက်ဖွယ်ရာများကို ပြောပြရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ၃။
လက်ခံလိုသူတို့ကမူ အကြောင်း အမျိုးမျိုးပြကြသည်။ ပြည့်တန်ဆာသည် ဘုရားရှင်လက်ထက်ကပင် ရှိခဲ့ကြောင်း (ဘုရားရှင်နှင့် လောကီရေး မဆိုင်ပါ၊ ဘုရားရှင်လက်ထက်တွင် သူခိုးလည်းရှိပါသည်၊မည်သည့်လက်ထက်တွင်မဆို ပြည့်တန်ဆာရှိပါသည်၊ ရှိတိုင်း လက်ခံရန်မလိုပါ) တိုင်းပြည်ကို အလှတန်ဆာဆင်ပေးသဖြင့် ပြည့်တန်ဆာဟုခေါ်ကြောင်း (မည်သို့နာမည်တတ်တတ်၊ ဖာသည်ဖာပင်ဖြစ်သည်) တရားဝင် သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ရဲများကို လိုင်းကြေး ဆတ်ကြေးပေးရခြင်းမှ ကင်းလွတ်နိုင်ကြောင်း၊ ဆေးစစ်ချက်များ လုပ်နိုင်သဖြင့် စိတ်ချရကြောင်း များ ပြောပြကြပါသည်။ (ထိုကိစ္စများကိုလည်း ရှင်းရပါမည်၊ ခဏသည်းခံပါ) ၄။ ကလေးပြော ပြောလိုက်လျှင်မူ ကိစ္စပြတ်ပါသည်။ ပြည့်တန်ဆာ ကိစ္စ တရားဝင်ရေး သဘောတူသူများသည် မိမိမိတ်ဆွေများကို “ငါ့ညီမကတော့ လိုင်စင်ရဖာကွ” ဟု ပြောရဲပါမည်လား။ ကိုယ့်အမျိုးထဲတွင် တရားဝင် ဖာခန်းထောင်သူများရှိလျှင် သဘောတူမည်လား။ မိုက်ရိုင်းချင်၍ မဟုတ်ပါ။ လူဆိုသည်မှာ ကိုယ့်နှလုံးသားထဲတွင်ရှိသော ကြိုးကို ဆွဲလှုပ်မှ နာချင်သည်။ ဖာများကို မသနား၍ မဟုတ်ပါ။ သနားသည်နှင့် တရားဝင်လုပ်ကာ သူရဲကောင်းဘွဲ့ပေးရန်လည်း မလိုပါ။ ဖခင်နဖူးမှ ခြင်ကို ရဲတင်းနှင့် ထုသတ်သော
စေတနာကို စေတနာဟု မသတ်မှတ်လိုပါ။ စေတနာကို ပညာတွဲမှ သာဓုခေါ်ရပါမည်။ ၅။ ပြည့်တန်ဆာ ကိစ္စကို အစိုးရတစ်ရပ်အနေဖြင့် သုံးမျိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ၁) ပြစ်မှု အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း Criminalisation ၊ ၂) ဥပဒေဘောင်အတွင်း ကန့်သတ်ဆောင်ရွက်စေခြင်း Legalisation ၊ ၃) ပြစ်မှုအဖြစ် လုံးဝ မသတ်မှတ်တော့ခြင်း Decriminalisation တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတိုင်း ပြည့်တန်ဆာကိစ္စကို တရားဝင် ခွင့်ပြုသည်မဟုတ်ပါ။ အထက်ပါ သုံးမျိုးကို နိုင်ငံအလိုက် ဆောင်ရွက်ကြသလို နိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းရှိ ဒေသအလိုက်ဆောင်ရွက်ကြ၊ ငြင်းပယ်ကြ၊ လက်ခံကြသည်လည်း ရှိပါသည်။ ပြည့်တန်ဆာကိစ္စကို ပြစ်မှုဘောင်အတွင်း သွတ်သွင်းရာတွင်လည်း နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ အလုံးစုံသော လိင်အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စမှန်သမျှ တားမြစ်ခြင်း Prohibitionist နှင့် လိင်အရောင်းအ၀ယ်ကို ခွင့်ပြုပြီး ကျန်ဆက်စပ်သမျှတားမြစ်ခြင်း Abolitionist(ဥပမာ- အများပြည်သူနေရာလိင်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ မြူဆွယ်ခြင်း၊ ဇိမ်နန်းထောင်ခြင်း) တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ယခု မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြောနေကြသူများသည် ဥပဒေအတွင်းမှ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်းကို တောင်းဆိုနေသည်ဟု ယူဆသည့် အလျောက် ထိုကိစ္စကို အသေးစိတ်ပါမည်။ ၇။ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကို တရားဝင် ခွင့်ပြုလိုက်သောအခါ တရားဝင်စေရန် လုပ်ရသော ကိစ္စများပါလာပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လိုင်စင်ချပေးခြင်း၊ မစစ်မနေရ ဆေးစစ်စေခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဖာများသည် များသောအားဖြင့် နယ်လှည့်လိင်လုပ်သားများ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နေရာတွင် ကြာရှည်နေလျှင် ဖောက်သည်ရသည်ဟု ယူဆနိုင်သော သာမန်အရောင်း အ၀ယ်ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ နေရာသစ်မှ လူအသစ်ဟုထင်ကြပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ဝယ် သက်တမ်းရင့်နေသော ပြည့်တန်ဆာကို မည်သူမှ
ငှားရမ်းပျော်ပါးလိုမည် မဟုတ်ပါ။ ထိုပြည့်တန်ဆာများအား တရားဝင် မှတ်ပုံတင်လာမည်ဟု ထင်လျှင်ထိုင်စောင့်ပါ။ မလာပါ။ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ဆေးစစ်ခြင်းကိုလည်း တစ်နေရာတည်းတွင် လုပ်ပါမည်လား။ သံသယရှိရပါသည်။ ဆေးမအောင်လျှင်လည်း “ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်” လုပ်စားမည်လား။ တရားဝင်ဖာမှာ တရားမ၀င်ဖာအဖြစ် ပြောင်းသွားခြင်းသာ ဖြစ်ပါမည်။ အသက်မပြည့်၍ မှတ်ပုံတင်မလုပ်ရသော ပြည့်တန်ဆာသည် ထိုအလုပ်ကို အသက်ပြည့်သည် အထိ စောင့်နေမည်လား။ ၈။ နောက်တစ်ချက်သည် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကို တရားဝင် သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ရာဇ၀တ်မှု လျော့ကျနိုင်သည် ဆိုသော အကောက်အယူဖြစ်သည်။ ရာဇ၀တ်မှုတွင် အုပ်စုဖွဲ့ အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ ရဲကြေးပေးရခြင်း၊ ကလေးပြည့်တန်ဆာ၊ လူကုန်ကူးမှု စသည်တို့
လျော့ကျမည်ဟု ဆြိုခင်းဖြစ်ပါသည်။ အရောင်းအ၀ယ်သဘောကို နားမလည်၍ ပြောခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ငယ်ငယ်ကိုမှ တပ်မက်သူ၊ အပျိုဘ၀ ၀ယ်လိုသူ (ကန်တော့ပါသည်၊ မရှင်းမည်စိုး၍ ရိုင်းရိုင်းဆိုပါမည်၊ ပါကင်ဖောက်လိုသူ) စသည်တို့ရှိနေလျှင်
မှောင်ခိုဈေးကွက်ရှိနေမည်သာဖြစ်သည်။ ထိုသို့ရှိနေလျှင် ရဲအဂတိကိစ္စ ရှိနေဦးမည်သာဖြစ်သည်။ ရဲများရဲကြေးတောင်းသည်ကို ပပျောက်ရန် ပြည့်တန်ဆာ တရားဝင်ရေးလုပ်မည်လား၊ ရဲအဂတိလိုက်စားမှု ပပျောက်ရေးလုပ်ရမည်လား ရှင်းအောင်တွေးစေချင်ပါသည်။ ရဲကမူ ဖာကြေး မရလျှင် နှစ်လုံးသုံးလုံးသမားဆီမှတောင်းပါမည်။ ၉။ လိင်အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စသည် ရောင်းသူဝယ်သူ နှစ်ဦးတည်းသာ ရှိသော ကိစ္စလို မရိုးရှင်းပါ။ တတိယလူ အမြဲလိုလိုရှိပါသည်။ ထို ပြည့်တန်ဆာများကို ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်နေသော ဇိမ်ခေါင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုခေါင်းများသည် များသော အားဖြင့် လူဆိုးလူမိုက်များဖြစ်ကြပါသည်။ တရားဝင်ဖြစ်လာသော ပြည်တန်ဆာကိစ္စများတွင် ထို
မန်နေဂျာများ တရားဝင် ပေါ်ပေါက်လာပြီး ရာဇ၀တ်မှုကို ကျူးလွန်နိုင်ခြေ ပိုများလာပါမည်။ ပြည့်တန်ဆာများကို ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း၊ ပချုပ်ဆိုင်ထောင်ခြင်း၊ အတင်းအကြပ် ဖာဇာတ်သွင်းခြင်းတို့ကို တရားဝင်လုပ်လာနိုင်ပါသည်။ ဖြစ်ပြီးလျှင် မျက်စေ့မှိတ်သည်က များပါသည်။ ပြည့်တန်ဆာနွံသည် ရုန်းထွက်ရန် ခက်ပါသည်။ ပြည့်တန်ဆာကိစ္စကို ဥပဒေပြုလျှင် ထို ဖာခေါင်းများအတွက် ဥပဒေ ထပ်၍ ပြုရပါသည်။ နိုင်ငံတကာကို ကြည့်စေချင်ပါသည်။ ၁၀။ နေရာကိစ္စသည်လည်း စဉ်းစားစရာ ကိစ္စ ဖြစ်လာပါမည်။လမ်းပေါ်မှ ဖာများအတွက် မြူဆွယ်ရန် နေရာ သတ်မှတ်ပေးရပါမည်။ တွေ့ရာတွင် မြူဆွယ်၍ မရပါ။ ဇိမ်နန်းထောင်ရာတွင်လည်း ထို့အတူပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရပ်ဒေသရှိ အမျိုးကောင်း သားသမီးများ အနှောက်အယှက် မဖြစ်စေရန် သီးသန့်နေရာ သတ်မှတ်ပေးရပါမည်။ ထို့အပြင် အများပြည်သူနှင့် ဆိုင်သော နေရာများတွင် လိင်အရောင်း အ၀ယ်လုပ်ခြင်း soliciting ကိုလည်း ထိန်းချုပ်ရပါမည်။ မည်သူသည် မိမိနေရပ်ကို တရားဝင် ဖာအရပ် အဖြစ် သတ်မှတ်ခံလိုပါမည်နည်း။ ပြည့်တန်ဆာ ဥပဒေကို လက်ခံလျှင် ထိုကိစ္စများကို ထည့်သွင်း ခွင်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ တံခါးပေါက်မှာ မြူဆွယ်ခွင့်၊ လမ်းပေါ်တွင် မြူဆွယ်ခွင့်၊ အိမ်သို့ အလုပ်သို့ ဖာခေါ်ခွင့်၊ ဇိမ်နန်းထောင်ခွင့် စသဖြင့် ပါဝင်လာပါမည်။ သားပျိုသမီးပျိုရှိသော အိမ်ရှေ့တွင် ပချုပ်ဆိုင်ထောင်သည်ကို မည်သည့်ဖခင်က လက်ခံလိုပါမည်နည်း။ ၁၁။ ထပ်မံစဉ်းစားစရာကိစ္စသည် ဥပဒေ
အသက်ဝင်ခြင်း ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးလိပ်အရက်များကို ၁၈နှစ် မကျော်သူများအား မရောင်းရန် ဥပဒေရှိပါသည်။ အားလုံးလိုလို မလိုက်နာပါ။ထိုသို့ ထိန်းညှိရန် အဖွဲ့ အစည်း အားကောင်းမှု မရှိပဲ တရားဝင် ခွင့်ပြုလိုက်လျှင် အာဏာဖြင့် ထိန်းချုပ်၍ ရသော ဘ၀မှ ထိန်းချုပ်ရန် အခွင့်အာဏာ ပင်ပျောက်သွားနိုင်ပါသည်။ ဘာနှင့်မှ ကိုင်တွယ်မရပဲ လူကုန်ကူးမှု၊ ကလေးပြည့်တန်ဆာအမှုတို့ တရားဝင် ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ တရားဝင်လာလျှင် မှောင်ခိုပြည့်တန်ဆာကိစ္စကို မည်သူကိုင်တွယ်မည်နည်း။ ရဲများကမူ ဖာကြေးကောက်ရသည့် အရသာကို သိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ၁၂။ ပြည့်တန်ဆာကိစ္စကို ဥပဒေဖြင့် ကန့်သတ်ခြင်းသည် လူထုအတွင်း လိင်မှုရောဂါများကူးစက်မှုကို ကန့်သတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ လူထုကို ဦးတည်ပါသည်။ ပြည့်တန်ဆာကိစ္စကို ပြစ်မှုအဖြစ်မှ ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းသည် လူ့အခွင့်အရေးကို ဦးတည်ပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးထောင့်မှ ကြည့်သူများသည် ပြည့်တန်ဆာအမှုကို သာမန်အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စ အဖြစ် ဥပဒေလုပ်ရန်မလိုပဲ ရှိရင်းစွဲ တားမြစ်ဥပဒေကို ပယ်ဖျက်ရုံသာရှိပါသည်။ ထိုအထိ လုပ်ရဲပါမည်လား။ ဥပဒေဖြင့် ကန့်သတ်လျှင်လည်း ပြည့်တန်ဆာများကို အန္တရာယ်ရှိသော လိင်ကိစ္စများအကြောင်း သင်တန်းပေးခြင်း၊ ဆာတီဖီကိတ် လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ၁၃။ ထိုသို့
ဆောင်ရွက်ပါသော်လည်း ပြည့်တန်ဆာကို ဥပဒေဖြင့် ခွင့်ပြုခြင်း၏ အကျိုးရလာဒ်ကို သိသာထင်ရှားစွာ မတွေ့ရကြောင်း သူရို့ ၀န်ခံကြပါသည်။ ၁) ရလာဒ်ကို သုတေသနပြုမှု၊ စောင့်ကြည့် အဆင့်မြှင့်ပေးမှု နည်းပါးခြင်းLittle evaluative research ၊ ၂) ဥပဒေဘောင်ဖြင့် ချဉ်းကပ်နည်းများ အတိုးအလျော့ လုပ်ရန်လွယ်ခြင်းVariations in legal frameworks within approaches ၊ ၃) အစီရင်ခံစားများ၏ ရလာဒ်ကို တိုင်းတာတွက်ချက်ရန် ခဲယဉ်းခြင်းValidity of reports ၊ ၄) အငြင်းပွားဖွယ်ရလာဒ်များရှိခြင်း Conflicting results (ဘာသာရေးသမားတို့က သိပ်များနေပြီထင်မည်၊ လူ့အခွင့်အရေးသမားက လိုသေးသည်ထင်မည်) တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ၁၄။ အဆုံးသတ်ပြောရလျှင် ဖူကူယားမား၏ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး စာအုပ်မှ အမှတ်ရမိသည်ကို ပြောပြလိုပါသည်။ဒီမိုကရေစီဖေါ်ဆောင်ရာတွင် ယဉ်ကျေးမှုဖက်တာသည် ရွေ့ပြောင်းရ အလွန်ခက်ပါသည်။ပြည့်တန်ဆာကိစ္စကို ယဉ်ကျေးမှုဖက်တာပေါ်တင်ကြည့်စေချင်ပါသည်။ (ယဉ်ကျေးမှုကို အကြောင်းပြ၍ ငြင်းခြင်း မဟုတ်ပါ၊ ပြည့်တန်ဆာကိစ္စကို ပြည်သူတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်လက်ခံသော သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်သော ဓလေ့အပေါ်တင်ကြည့်စေရန် ဆိုလိုပါသည်။ ပြည်သူတို့ အလွယ်တကူ ခေါင်းငြိမ့်မည်လော၊ ငြင်းပယ်မည်လော ဆိုသည်ကို စဉ်းစားရန် ဖြစ်ပါသည်) ထိုအလုပ်ကို မဆိုထားနှင့်၊ ဖာဟူသောစကားကိုပင် နှုတ်က မထွက်ရဲသူများရှိကြောင်း သိစေလိုပါသည်။ ၁၅။ သူရို့ဆီမှာ၊ သူရို့ဆီမှာနှင့် လွယ်လင့်တကူ ဒီမိုကို ကရေစီပြသူများ စဉ်းစားစေချင်ပါသည်။ သူရို့ဆီမှာတိုင်း ပြည့်တန်ဆာဥပဒေကို လက်ခံကြသည်မဟုတ်ပါ။ တားမြစ်သောနိုင်ငံများစွာရှိပါသည်။ ကိုယ့်အခြေအနေကို မသုံးသပ်ပဲ လွယ်လင့်တကူ တင်သွင်းလို၍ မရပါ။ သူ့ရေမြေမှာပေါက်တိုင်း ကိုယ့်ရေမြေနှင့် အံမ၀င်ပါ။(ယခုစာစုတွင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို အကြောင်းပြ၍ မငြင်းခဲ့ပါ၊ ) ဆင်ခြင်တုံတရားကို သုံး၍ သုံးသပ်စေလိုပါသည်ခင်ဗျား။ ၁၆။ ထို့ထက်ပို၍ ဆိုရန် မရှိပါ။ နောက်ဆက်တွဲ (၁) ပြည့်တန်ဆာကိစ္စသည် ပပျောက်ရန် လုပ်မရပါ။ ပပျောက်ရန် လုပ်မရ၍ တရားဝင်လုပ်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။တိုးတိုးကြိတ်ကြိတ် ဖြေရှင်းခြင်းကိုသာ ကာယကံရှင်များက ပိုသဘောကျပါသည်။တရားဝင်ဖာအဖြစ်ရပ်တည်ရန်သည် နောင်ရေးရှိပါသေးသည်။ အသက်ကြီးလာလျှင် မိသားစုနှင့် နေချင်ကြပါလိမ့်မည်။ မည်သူမှ ထာဝစဉ်ဖာလုပ်မရပါ။ ဖာမှတ်ပုံတင်ထားလျှင် အသက်ကြီးလျှင် ခေါင်းဖြစ်သွားပါမည်။ မှတ်ပုံမတင်လျှင် မသိလိုက် မသိဘာသာ စွန့်ခွာ၍ ရနိုင်ပါသည်။ (၂) ဆရာပြောပြသော ဥပမာလေး အလွန်ကောင်းပါသည်။ အမိန့်ရ
အပေါင်ဆိုင်သည် အပေါင်ဆိုင် သတ်သတ်လုပ်ပါက မည်သူမှ မ၀င်လိုပါ။ (ဆိုင်ထဲဝင်လျှင် ပေါင်ရန်မှန်း လူတိုင်း သိပါသည်) အပေါင်ဆိုင်ကို စတိုးဆိုင်လေးနှင့် တွဲဖွင့်ပါမှ ပစ္စည်းလေး တစ်ခုခု ၀ယ်သလိုနှင့် ၀င်ပေါင်ပါသည်။ကေတီဗီအဆိုတော်လုပ်ခြင်းသည် ထိုသို့ သဘောပါနေပါသည်။ ဖာများမှတ်ပုံတင်မည်မဟုတ်ပါ။ မတင်မည့်အတူတူ အခြားသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဖာကိစ္စ ပပျောက်ရန် ကြိုးစားစေချင်ပါသည်။ (၃) ဖာထက် အရေးကြီးသည်မှာ
ချုပ်ထားသော ခေါင်းများဖြစ်ပါသည်။ သူရို့က ဖာများကို ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း၊ ဇိမ်ခန်းထောင်ခြင်း၊ ဖာဇာတ်သွင်းခြင်းများ လုပ်ပါသည်။ ဖာကိုဖမ်းသဖြင့် ပြဿနာ မပြေလည်ပါ။ အညှာက ခေါင်းများဖြစ်ပါသည်။ ဖာများကို ကယ်လိုလျှင် ခေါင်းကို အားပေးသော ဥပဒေပြုရေးထက် သူရို့ကို အရေးယူနိုင်ရန်သာ ကြိုးစားစေချင်ပါသည်။ ချိုးငှက်
၅ နာရီခန့်မှစပြီး ကေအိုင်အေမှ ကာမိုင်းရဲစခန်းအား ၀င်ရောက်စီနင်း တိုက်ခိုက် ဖျက်စီးသွား သည်ဟု သိရှိရပါသည်။ မနက် ၅ နာရီ ခန့်တွင် ကေအိုင်အေအဖွဲ့ ၁၀၀ ကျော်ခန့် ကာမိုင်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ကာမိုင်းရဲစခန်းအား လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။ ကာမိုင်းရဲစခန်းတွင် ရဲအင်အား ၃၂ ဦးသာရှိပြီး ကေအိုင်အေ၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ပြန်လည် တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း အင်အားမမျှသဖြင့် ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။ ကေအိုင်အေ မှ ၅ နာရီလောက်မှ ၇ နာရီခွဲ အထိ တိုက်ခိုက် နေတာဖြစ်ပြီး ရဲတွေ ဆုတ်သွားတဲ့အတွက် ကေအိုင်အေ မှ ရဲစခန်းအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ပြီး မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကေအိုင်အေများက ရဲစခန်းအတွင်းမှ အဆောက်အဦ ၆ လုံးနဲ့ ကားတစ်စီး ကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီး ခဲ့သည်။ ကေအိုင်အေ၏ ကာမိုင်းရဲစခန်း တိုက်ခိုက်မှုတွင် ရဲ ၂
ဦး သေဆုံးပြီး ဒုရဲအုပ်တစ်ဦးအပါအ၀င် ၄ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်ဌာနမှ
၀န်ထမ်း ၂ ဦး ပျောက်ဆုံးနေကာ ကေအိုင်အေတွေ ဖမ်းဆီးသွားသည်ဟု ယူဆရ ကြောင်း၊
ပျောက်ဆုံးနေသည့် လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်း ဦးသိန်းလွင်၏ ဇနီး ဒေါ်စန်းငွေ၏ ယာပေါင်တွင် ကေအိုင်အေမှ ပစ်ခတ်ခဲ့သော လက်နက်ထိမှန်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ကေအိုင်အေမှ ရဲစခန်းအား စိတ်ကြိုက် မီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီး ၈ နာရီခွဲခန့်တွင် ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြောင်း ကာမိုင်းရဲစခန်းအနီးရှိ ဒေသခံ တစ်ဦးမှ ပြောဆိုခဲ့သည်။ ၁၉- ၁- ၂၀၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၀၄၅၅ အချိန်တွင် ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ကာမိုင်းမြို့နယ်ခွဲ ရဲစခန်းသို့ ကေအိုင်အေ အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်သူ အဖွဲ့မှ အင်အား အလုံး အရင်းဖြင့် စတင် တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြောင်း၊
၀၇၂၀ အချိန်ထိ ရဲစခန်း အတွင်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များ စုစည်း၍ ပြန်လည် တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြောင်း၊ ၀၇၄၅ အချိန်တွင် ရဲစခန်း အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီး မီးရှို့ ဖျက်ဆီးမှုများ ပြုလုပ်၍ ၀၉၄၅ အချိန်တွင် ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားကြောင်း၊ တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများမှ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားရာသို့ ချီတက်လျက် ရှိကြောင်းနှင့် အသေးစိတ် အချက်အလက် များအား ထပ်မံ ထုတ်ပြန် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ဇန်န၀ါရီလ ၁၉ ရက် နံနက် ၆ နာရီမှစပြီး အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကို မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ရုံ သာလုပ်ဆောင်ရန်၊ အပစ်ရပ်ရန် အမိန့်ထုတ်ထားသည်ကို ဇန်န၀ါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီ သတင်းတွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါသည်။ ကေအိုင်အေမှ ၄င်းကြေညာချက်ကို လက်တလုံးခြားလုပ်ဆောင်ပြီး ၅ နာရီမှာ ရဲစခန်းကို ၀င်တိုက်တာလား… ? ဒါမှမဟုတ် ကေအိုင်အေမှ အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှုကို မလိုလား၍ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတာလားဟု ၄င်း ဒေသခံမှ ဆက်လက်ပြောကြား ပါသည်။ တပ်မတော်က ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့မနက်ကစပြီး လဂျားယန်ဒေသမှာ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ နယ်မြေရှင်းလင်းမှုစစ်ဆင်ရေးများကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ကာ ကေအိုင်အေနဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ဒေသအားလုံးမှာလည်း
သမ္မတကြီးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း မိမိကိုယ် မိမိ ခုခံ ကာကွယ်ရန်မှအပ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ မပြုလုပ်ရန် ဆိုသည့်အချက်ကို တိကျစွာ
လိုက်နာသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က ထပ်မံအတည်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီနေ့မနက်မှာလည်း နိုင်ငံတကာသံတမန်များ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိုင်အန်ဂျီအိုများတက်ရောက်တဲ့ နိုင်ငံတကာဖိုရမ်မှာလည်း သမ္မတကြီး က ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ထပ်ပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။။ တပ်မတော်ဘက် က စစ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်များရပ်ဆိုင်းသလို ကေအိုင်အေဘက်ကလည်း အလားတူတုန့်ပြန်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ သို့သော် နာရီပိုင်းအတွင်းမှာပင် ယနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့မနက် ၄နာရီကျော်ကနေ ကိုးနာရီ ခွဲလောက်အထိ ဖားကန့်မြို့နယ်က ကာမိုင်းရဲစခန်းကို ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့ များက ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီ application လေးသည် အစစ်အမှန် vibratorအစားအသုံးပြု၍ရရှိရန်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားသော application ဖြစ်သည်။ vibrator အစစ်အမှန်ဝယ်ယူရ န်ခက်ခဲသော မြန်မာပြည်အတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဝယ်ယူ၍ ရရှိပါသော်လည်း သိမ်းဆည်း ထိန်းသိမ်းရန်မှာ မြန်မာမိန်းကလေးများ
အတွက် လွယ်ကူသောကိစ္စမဟုတ်ပေ။ ဒီ application သည် Android ဖုန်းမည်သည့်အမျိုးအစားနှင့်မဆို အသုံးပြုရန် အဆင်ပြေပါသည်။ ပါဝင်သော Vibration Mode (တုန်ခါမှုပုံစံ) များမှာလည်း..... slow,slowest, gentle, gentlest, long, longest, hard, hardest, mix and extra ဆိုပြီး ၁၀ မျိုးပါဝင်ပါသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သည့်ပုံစံကို အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့် နေရာကို application ဖွင့်ပြီး ဖုန်းနဲ့ကပ်ထားပါက သင်လိုချင်သည့် ခံစားမှုကို ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အားသာချက်-တုန်ခါမှုဆယ်မျိုးပါခြင်း အားနည်းချက်-ဖုန်းကို vibrator အစားသုံးခြင်းကြောင့်မိန်းကလေးပစ္စည်း အတွင်းသို့ ထည့်၍ မရခြင်း ဒီ application လေးကို စမ်းသပ်ချင်တယ် ဒါမဟုတ် ကိုယ့်ချစ်သူကို လက်ဆောင်ပေးမည်ဆိုပါက Download link ကတော့ http://www.datafilehost.com/download-d059a9a7.html
အဆုိုပါကွန်ဒုံး သည် မတော်မတရားပြုကျင့်ခြင်း ခံရမည့်ဘေးမှ ကာကွယ်နုိုင်သည့်အပြင် ခုခံအားကျဆင်းမှု အပါအဝင် အခြားသောလိင်ရောဂါများ နှင့်အတူ မလိုလားအပ်သော ကုိုယ်ဝန်ဆောင် ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်နုိုင်မည်ဟုဆုိုသည်။
အတွင်းဘက်၌ ဘရိတ်ဒါးကဲ့သုို့ထက်သော ဒါးသွားများ ပါရှိကာ ဓမ္မတာလာစဉ် အသုံးပြုသည့် tampon ကဲ့သို့ပင် မိန်းမကုိုယ်အတွင်းသုို့ ထည့်သွင်း အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ မုဒိန်းကျင့်ရန်ကြံစည်သူသည်မိန်းမကုိုယ်အတွင်း လိင်တံကုို
လိင်တံတွင် ဒါးသွားများလာရောက် စိုက်မိပြီး မခံမရပ်နုိုင်အောင် နာကျင်မှုကုို ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ လိင်တံကုို ဆွဲနှုတ်ချိန်တွင် အဆုိုပါ ကွန်ဒုံးသည်လည်းလိင်တံနှင့်အတူ ကပ်ရပ်ပါသွားမည်ဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးသည် ထွက်ပြေးရန် အခွင့်အရေးရမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကွန်ဒုန်းကို
လွယ်လင့်တကူ ဖယ်ရှား၍ မရဘဲ ခွဲစိတ်ပြီးမှသာ ဖယ်ရှားနိုင်မည် ဖြစ်၍ မုဒိန်းသမားကုို ဆေးရုံ ဆေးခန်းမှ တာဝန်ရှိသူကရဲကုိုအကြောင်းကြားခြင်းဖြင့် လက်ရဖမ်းမိမည် ဖြစ်သည်။ လိင်တံတွင် စုိုက်မိနေသော ဒါးသွားများသည် အရေပြားကုိုသာ ထွင်းဖေါက်မည်ဖြစ်ပြီး အရေပြားအောက်တွင် ရှိသော တစ်ရှုးကုို ထိမည်မဟုတ်သဖြင့် သွေးထွက်မည်မဟုတ်။
source: rape axe Internet news and official website ဒီပို့တင်ခဲ့သောသူ